Google က | November 2019
အဓိက Google က
သငျသညျကို Google သို့ logged ကြသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်သင့်အကောင့်ဆက်တင်သွားဖို့အချိန်ပါပဲ။ တကယ်တော့ settings ကိုသူတို့တစ်တွေပိုမိုအဆင်ပြေအသုံးပြုမှုကို Google ကန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်နေကြတယ်, ဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။ သင်၏ Google အကောင့်ကို Log ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ငါဘယ်လိုမျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်လက်ယာထောင့်၌သင်တို့၏နာမတျော၏တစ်ဦးမြို့တော်စာတစ်စောင်နှင့်အတူလှည့်လည် button ကို click, သင်၏ Google အကောင့်ကို sign ကြဘူး။
စားပွဲတင်က Google အတွက်စွဲစေညှို့
၎င်းတို့၏မိုးတိမ်သိုလှောင်မှုသို့ပေါင်းစည်းသော Google ထံမှ virtual ရုံး suite ကို, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုခြင်းနှင့် gratuity ၎င်း၏လွယ်ကူခြင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အကြားအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ ဒါဟာဆလိုက်, Form များ, စာရွက်စာတမ်းများ, စာရင်းဇယားများကဲ့သို့သောကို web applications များပါဝင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအမှုတော်ကို, သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်မှ web browser ကို၌ရှိသကဲ့သို့, ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
Google Maps ပေါ်မှာသြဒီနိတ်အားဖြင့်ရှာရန်
Google Maps ကိုမှ Google Maps ကို Go ကိုအတွက်ရှာပါ။ ရှာဖွေစေရန်, ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: object တစ်ခု၏က Google-အကောင့်အနေအထား logging ပြဿနာများရှာဖွေရေး box ထဲမှာထဲသို့ဝင်ရပါမည်ဖြေရှင်း။ အဆိုပါလက်ခံခဲ့သည် input ကိုကို formats ဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့် (ဥပမာ 41 ° 24'12.2 "N ကို2° 10'26.5" အီး); ဒီဂရီနှင့်ဒဿမမိနစ် (41 မှ 24 ။
Google မှသင့်အကောင့်ကို restore လုပ်နည်း
သင်၏ Google Account သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံး - အဘယ်သူမျှမကဖြစ်ရပ်ဆန်းရှားပါးဆိုလိုသည်။ များသောအားဖြင့်ဒီအသုံးပြုသူရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူး restore ။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ restore လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့? ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တက်ဖတ်ရန်: အကောင့်ချက်ချင်းဖျက်ထားသည် အကယ်. သင်သာမပိုသုံးထက်ရက်သတ္တပတ်အကြာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသော Google Account ကိုပြန်ယူနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါသင်၏ Google အကောင့်အတွက်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကဘယ်လို။
Google ကန်ဆောင်မှုရုံး၏အကူအညီဖြင့်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်စာသားအားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံစံများကိုဖန်တီးနိုင်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သော Microsoft က Exel အစီအစဉ်တွင် run သောသူတို့ကိုအဖြစ်စားပွဲ။ ဤဆောင်းပါး၌, ရဲ့အသေးစိတ် Google က Sheet များအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ သင်၏ Google စာရင်းဇယားကိုစတင်ရန်, သင့်အကောင့် login ။
သင့်ရဲ့ site ကို Google ရဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုမှ Submit
သင်ဟာ website တစ်ခုဖန်တီးဆိုပါစို့, ထိုသို့ပြီးသားအချို့အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။ ထိုသို့စာမျက်နှာကြည့်ရှုမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များရှိပါသည်တဲ့အခါမှသာ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ web-based အရင်းအမြစ်လူသိများသည်နှင့်အမျှ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူက site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ "အသွားအလာ" စီးဆင်းမှု၏အယူအဆအတွက် fit နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တို့၏ "ငယ်ရွယ်" အရင်းအမြစ်လိုအပ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ browser မှာကို Google home page ကို Install
Google က - ဝေးများကကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများရုံသူမ၏အတူကွန်ယက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်စတင်ကြောင်းထို့ကြောင့်ထူးဆန်းဘူး။ သငျသညျတူညီသောပြုလျှင်တစ်ဦး home page ကို web browser ကိုအဖြစ် Google က set - အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး။ တစ်ခုချင်းစီကို browser setting ကိုတွေနဲ့ parameters ၏အမျိုးမျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားသည်။
Google Docs - ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အခမဲ့နှင့် Cross-platform ဖြစ်ခြင်း၏စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ထက်ပိုတက်စေပါသောရုံးခန်း suite ကို - Microsoft Office ။ ပိုပြီးလူကြိုက်များ Excel ကိုယုတ်ညံ့အများအပြားအရိုအသေတစ်ဦး spreadsheet ဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ဘို့မိမိတို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကိရိယာများအတွက်လက်ဆောင်မပေးတတ်၏။
Google ကလူကြိုက်များတဲ့ browser များအတွက် Translate Installing
များစွာသော user တွေရဲ့သတိထားဖို့အများကြီးအင်တာနက်ပေါ်ရှိအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်, မကြာခဏကအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အခြားဖြစ်, non-ရုရှားဘာသာစကားမှာတင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သငျသညျ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့အနည်းငယ်ကလစ်အတွက်စာသားကဘာသာပြန်ဆိုဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသင့်တော်ဆုံးတူရိယာရွေးချယ်နိုင်သည်။
Google Maps တွင်လမ်းညွန် Get
Google Maps ကိုတစ်ဦးအလွန်အသုံးဝင်သော function ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူစီစဉ်ပေးသည်နှင့်သင် "B က" ထောက်ပြရန် "တစ်ဦးက" ပွိုင့်ထဲကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့အချိန်တွေအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့သညျဤဝန်ဆောင်မှု၏အကူအညီဖြင့်လမ်းညွန်ရရှိရန်မည်သို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုတင်ပြ။ Google Maps ကိုသွားပါ။
တစ်ဦးက Google စာရွက်စာတမ်းကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Google ကဝန်ဆောင်မှုစာရွက်စာတမ်းသငျသညျကိုမှန်ကန်အချိန်စာသားဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံကိုသင်အတူတကွတည်းဖြတ်တက်ဆွဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖိုင်တွေသိမ်းဆည်းဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ သင်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဘယ်မှာအခါလိုအပ်သောသငျသညျရှိသည်သော device များ၏အကူအညီဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Google နဲ့အဆက်အသွယ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်မနေပါနဲ့: ဖြေရှင်းချက်
အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်း operating system အဖြစ်လုံးဝနီးပါးအသုံးပြုသူများသည် '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာသည်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းမည်သည့်ခေတ်သစ်ပလက်ဖောင်း။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သော tool ကိုအဆက်အသွယ်, စကားဝှက်, applications များ, ပြက္ခဒိန် entries တွေကို, etc ၏ထပ်တူဖြစ်ပါသည် သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင် operating system ကို၏ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါတဲ့ဒြပ်စင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရပ်?
Google ၏အကူအညီဖြင့်ပုံ၏ဘာသာပြန်စာပေ Translate
Google ကအားလုံးကိုလက်ရှိတည်ဆဲဘာသာပြန်ချက်န်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ရှိသမျှသောလောကီဘာသာစကားများ supporting, လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အတူတူပင်အရည်အသွေးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တခါတရံတွင်သူကတစ်နည်းနည်းနဲ့မဆိုပလက်ဖောင်းပေါ်စေနိုငျသောပုံရိပ်ကနေစာသားဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်ပေသည်။
Google ဓါတ်ပုံများကို log in ကိုဘယ်လို
(ဗီဒီယိုများအတွက်) လူကြိုက်များသည်ဤဖိုင်တွေရဲ့ resolution က (ပုံများအတွက်) 16-megapixel ထက်မပိုပါဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံး၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းတို့၏မူလအရည်အသွေးပုံရိပ်တွေနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပ်၏မိုဃ်းတိမ်န့်အသတ်အရေအတွက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ Google ရဲ့ကနေဝန်ဆောင်မှုနှင့် 1080p - ဓါတ်ပုံများ။ ဒီထုတ်ကုန်များတွင်သာထိုသူတို့အား access ကိုရဖို့ရန်သည်အခြားပိုမိုအသုံးဝင်သော features တွေနဲ့ functions တွေအများကြီး, ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် client ကိုလျှောက်လွှာများ၏ site ကိုမှအပေါ် log ရမည်ဖြစ်သည်။
Google ရဲ့ဘရောက်ဇာများအတွက်စီးပွားဖြစ် applications များ
Google ကအတော်လေးအနည်းငယ်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ search engine ကို, ကို Android OS နဲ့ browser ကို Google Chrome ကိုအသုံးပြုသူများအကြားလူကြိုက်အများဆုံးသိရသည်။ အဆုံးစွန်သော၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုကုမ္ပဏီ store မှာကိုယ်စားပြုအမျိုးမျိုးအတွက် add-ons တွေကိုနှင့်အတူတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆိတ်ကွယ်ရာသူတို့ထံမှ Web-based application များသည်လည်းရှိပါသည်။
ဘာဂ်« Google Talk ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း "ပျက်ကွက်
အမှားများကိုအမျိုးမျိုးမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအတွက်အခြားမည်သည့်ကိရိယာကို Android-device များနှင့်အတူအမျှအရာများထဲမှ "authentication ကို Google Talk ကို»ပျက်ကွက်နေပါတယ်။ အခုပြဿနာကအတော်လေးရှားပါးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလွန်ရှင်းလင်းသောအားနည်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ပျက်ကွက်ပါကမဖြစ်နိုင် Play Store မှ apps များ download လုပ်ရန်စေသည်။
အဘယ်သို့ငါသင်၏ Google အကောင့်ကို sign ပါဘူး
အများစုမှာ Google ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီနေ့စနစ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါ။ အများအားဖြင့် Google ကမှတ်ပုံတင်စဉ်ကထည့်သွင်းထားသည့်ဒေတာသိုလှောင်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်လည်ပတ်နေသဖြင့်, သင်ချက်ချင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ရနိုင်သည်။ သင် account တစ်ခုထဲကနေ "ပစ်ချ" နေကြသည်ဆိုအကြောင်းပြချက်ဆိုပါက (သင် browser ကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြပါလျှင်ဥပမာအားဖြင့်,) သို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာကနေဝငျရောကျဖို့, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ခွင့်ပြုချက်သင့်အကောင့်အတွက်လိုအပ်သည်။
Google Maps ပေါ်မှာမျဉ်းများ၏ပါဝင်
Google Maps ကိုအသုံးပြုခြင်းစဉ်အတွင်းအခြေအနေများကြောင့်လိုင်းပေါ်အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိတိုက်ရိုက်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သောအခါရှိပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ tool ကို main menu ကိုအပေါ်အထူးအပိုင်းနှင့်အတူ activated ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့က Google Maps ပေါ်မှာမျဉ်းများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုဆှေးနှေးပါမညျ။
Google က Android ကိုအတူအဆက်အသွယ်တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျအပြည့်အဝပြန်လည်သတ်မှတ်မှုသို့မဟုတ် re-flash ကို run သွားလျှင်စဉ်းစားရကျိုးနပ်မှာ Android-device ကိုအပေါ်အဆက်အသွယ်စာရင်းထိန်းသိမ်းအကြောင်း။ ဤအတူ, သင်တန်း, ဆက်သွယ်စာရွက်ရဲ့ standard လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံးကကူညီနိုင်သည် - သွင်းကုန် / ပို့ကုန်မှတ်တမ်းများ။ သို့သော်နောက်ထပ် ပို. နှစ်သက်သောဂျလည်းမရှိ - "။ မိုဃ်းတိမ်" နဲ့ထပ်တူ
တက်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို Google ပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြု.
Microsoft Word ကိုတစ်ဦးချင်းသင်္ကေတ Add
Google Chrome ကိုစတင်စာမျက်နှာကို configure လုပ်နည်း
Windows7မှာနောက်ခံအစီအစဉ်များကို turn off
Mozilla Firefox browser ကို - တစ်ရေပန်းစားသော web browser ကို၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာသင်ဘရောက်ဇာကိုအလုပ်အသေးစိတ် customize စေရွေးချယ်စရာကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးရှိပြီးဖြစ်သော။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါက web အရင်းအမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှငျ့ရငျဆိုငျနေလျှင်ကံမကောင်းစွာ, browser ကိုအထူးပြု tools တွေမပါဘဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါလိမ့်ဤနေရာတွင်နှင့်မဖြတ်သန်းပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
https://termotools.com my.termotools.com © Google က 2019